inhlanganisela kahle okhethiweyo imibala nezinye imibala kukuvumela bheka obunobunye, uze ufihle ezinye amaphutha sibalo ukuthi ungowesifazane noma owesilisa. Ngokwesibonelo, ihembe elimhlophe, kuhlangene grey, omnyama, isiketi esiluhlaza sasibhakabhaka kuyisimo Classic, okuyinto ikuvumela ukuba zibukeke ewumngcingo le okhalweni olubanzi, etholakala ku- amantombazane amaningi. Ngakho, i-Ukwakheka ephambene - the "ngezansi amnyama nokukhanya phezulu" - kungaba imaski amavolumu amaningi okweqa esifubeni engenhla. UMFANEKISO amnyama ngokuphelele enze sibalo slimmer, kodwa ngesikhathi esifanayo dwebela wabuka yayo (azikwazi njalo).
Inhlanganisela imibala nezinye imibala ngokuvamile eyakhelwe indawo yabo kuleli okuthiwa "umbuthano Newton", lapho amathoni eziyinhloko blue, red yellow, kanye Lesisemkhatsini - shades of eluhlaza, olintshi onsomi. Kukholakala ukuthi obomvu umbala okuphikisana oluhlaza, ophuzi - onsomi okwesibhakabhaka - orange. Ngakho-ke, asetshenziselwa ukwakha izithombe ashukumisayo ezidonsela ukunakekela. Ukwakha wezigqoko ezifanako zangamalanga Kunconywa ukusebenzisa imibala ukuthi sekuseduze e ithoni kuya Newton Circus. Lapha, kungenzeka inhlanganisela ezifanele ijezi obuluhlaza jeans okwesibhakabhaka noma obomvu-orange dress nombala elingenamikhono le izindunduma zesihlabathi.
Uma une umbala intandokazi, kodwa ungafuni ekhanda kuye ozwaneni bheka inhlanganisela efanayo imibala nezinye imibala kuzosiza ukuvuselela isithombe, uma ukuthatha ezihlukile nangebala. Ngokwesibonelo, umbala ezijulile umbomvana kungenziwa kuhlangene i-emeraldi * futhi accessorize shades lime kanye Mint. Isithombe uyobheka esihle fresh kakhulu.
Inhlanganisela imibala nezinye imibala incike inani izingubo okungukuthi okungaphakathi kumuntu. + Imikhiqizo ezincane kanye izesekeli (kwabesifazane kungase kube, isibonelo, ihembe, isiketi, amasokisi amade, esikhwameni, izicathulo, ubucwebe, isikhafu, isigqoko, ijazi noma ingubo, isambulela, njll), The kuba lula ukukhetha imibala efanele futhi nangezindlela ezihlukahlukene. Kuye inani eliphelele imibala ezishisa kakhulu zikhipha izinhlayiyana sikali lesilula (kudalwa isithombe abathintekayo kuze kube ngemibala emithathu okufakayo) futhi eziyinkimbinkimbi (ngemibala emine noma ngaphezulu).
Qaphela ukuthi i-ibhizinisi kusihlwa isithombe, okuvame ukusetshenziswa inhlanganisela enhle imibala ngemibala emibili noma emithathu. Ngokwesibonelo, esiqinile usilika ihembe umbala ubisi Baked kungenziwa kulekelelwa sinombala isiketi segolide imihlobiso yegolide kanye isikhwama beige. Kodwa ebhishi, isitayela romantic and zokudala ivumela inombolo enkulu imibala. The best iyona khona kule izingubo abangeqile kwabathathu imibala eyinhloko futhi omunye ezengeziwe izesekeli. Ziyanda kuholela ngokweqile "mottled", okungatholakali ezifanele ngaso sonke isikhathi.
ithebula umbala elihlangana Universal, ngeshwa, azikwazi ukwenziwa, ngoba esimweni ngasinye kubalulekile ukuze ukhethe Palette umbala. Wochwepheshe lokuqala zonke sinake izici ngazinye, othile okulungiselelwe ikhabethe. Lapha, yebo, acabangele uhlobo ukubukeka ( "Spring", "Summer", "Winter" noma "yasekwindla,"), ikakhulukazi izibalo, ubudala, yokuphila, umsebenzi, kanye umcimbi lapho omunye ekhethiwe noma elinye iqoqo izingubo.
Ukukhetha isitayela imfashini zokugqoka
"Matilda" - ithangi lokusekela abantwana
Snezhina Kulov: izithombe kanye biography
Lwemali Tunisian. Incazelo kanye nomlando